Flọ ọrụ China nke Ibiza Android Car Dvd, Ibiza Android 4.4 / 5.1.1 / 6.0.1 Redio Car
Nkọwa:Ibiza Android Car Dvd,Ibiza Android 4.4 Car Dvd,Ibiza gam akporo 5.1.1 Car Dvd,Ibiza gam akporo 6.0.1 Redio ụgbọ ala,,
Home > Ngwaahịa > Oche Android Car Dvd
Ngwaahịa nke Oche Android Car Dvd , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, Ibiza Android Car Dvd , Ibiza Android 4.4 Car Dvd suppliers / factory, wholesale high-quality products of Ibiza gam akporo 5.1.1 Car Dvd R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
Android Bilstereo multimedia navigation maka LEON 2014  Kpọtụrụ ugbu a
Ihe ntụrụndụ ụgbọ ala Rockchip PX5 maka PASSAT 2015  Kpọtụrụ ugbu a
igwe okwu igodo igwefoto maka IBIZA 2013  Kpọtụrụ ugbu a
stereos ụgbọ ala na ọtụtụ mgbasa ozi maka LEON 2014  Kpọtụrụ ugbu a
PX5 Android Car Navigation maka Ibiza 2018  Kpọtụrụ ugbu a
Sistemụ mgbasa ozi ụgbọ ala Peugeot 206  Kpọtụrụ ugbu a
Peugeot 408 android dvd Player  Kpọtụrụ ugbu a
Oche oche android android 7.1  Kpọtụrụ ugbu a
Oche android 7.1 stereo ụgbọ ala  Kpọtụrụ ugbu a
Android Car DVD Player Maka oche Ibiza 2013  Kpọtụrụ ugbu a
LEON 2014 onye ọkpụkpọ DVD DVD maka usoro Seat  Kpọtụrụ ugbu a
DVD ụgbọ ala Android maka oche oche LEON 2014  Kpọtụrụ ugbu a
Android ụgbọ ala dvd maka Ibiza 2018  Kpọtụrụ ugbu a
stereo ụgbọ ala nwere gps maka LEON 2014  Kpọtụrụ ugbu a
Android Bilstereo multimedia navigation maka LEON 2014
Android Bilstereo multimedia navigation maka LEON 2014 Android Bilstereo maka LEON 2014 wuru na Wi-Fi na-enye ohere maka nbudata ngwa ngwa nke LTE na ohere ịntanetị, ebe ọ bụla ị nọ. Igwe redio wuru na RDS nwere nyere gị ọdụ 18FM & 12AM yana...
Ihe ntụrụndụ ụgbọ ala Rockchip PX5 maka PASSAT 2015
Android 8.0 ụgbọ ala dvd maka PASSAT 2015 1 ) gam akporo 8.0, CPU: Rockchip PX5 Octa Core, Ram: 4GB 2 ) Na-akwado nsonaazụ ọdịyo subwoofer, ma na-ejikwa ya iche. Mkpebi ihuenyo: 1024 * 600 , Nkwado 1080P HD video, na-akwado ọrụ njikọ enyo, You nwere...
igwe okwu igodo igwefoto maka IBIZA 2013
Android 8.0 PX5 auto navigation multimedia maka IBIZA 2013 1. Ọ bara uru na igwe okwu Igwe na-akwọ ụgbọala maka IBIZA 2013. 2. Kwekọrịrị n'ọtụtụ njikwa njikwa wiilị. Ọ dị mfe igbanwe egwu, ọwa ma mezie olu iji nyere gị aka belata ndọpụ uche ma...
stereos ụgbọ ala na ọtụtụ mgbasa ozi maka LEON 2014
Ntọala ụgbọ ala Android 8.0 PX5 na nkeji ọtụtụ maka LEON 2014 1. Kacha ọhụrụ gam akporo 8.0 OS nwere 4GB Ram, Octa-Core & 32GB ROM. 2. can nwere ike nweta ntughari ngwa ngwa site na iji ntanetị, ntanetị ma ọ bụ ịzụta kaadị eserese. Ọ nwere ike...
PX5 Android Car Navigation maka Ibiza 2018
PX5 Android Car Navigation maka Ibiza 2018 Ekele maka ihe ọhụrụ Android 8.0 Oreo na-enyere aka belata ọrụ ndabere na ngwa ndị ị na-eji dịkarịa ala iji bido ngwa ngwa. Ọzọkwa Google Play ọhụrụ niile na - echebe, na - enyere aka ijikwa hụ na ngwa...
Sistemụ mgbasa ozi ụgbọ ala Peugeot 206
Sistemụ mgbasa ozi ụgbọ ala Peugeot 206 Sistemụ Njikọ Peugeot 206 ngwaike ngwaike Ọdụdọ OS: Android 7.1.2 sistemụ CPU: Rock mgbawa PX3 Cortex A9 Ram: SAMSUNG DDR3 2GB Flash: 16GB Redio: FM / AM GPS: SIRF III Ihuenyo: Igwefoto nwere otutu ihu ya (ihu...
Peugeot 408 android dvd Player
Peugeot 408 android dvd Player Peugeot 408 gam akporo ụgbọ ala dvd ngwa egwu ngwanrọ OS: Android 7.1.2 sistemụ CPU: Rock mgbawa PX3 Cortex A9 Ram: SAMSUNG DDR3 2GB Flash: 16GB Redio: FM / AM GPS: SIRF III Ihuenyo: Igwefoto nwere otutu ihu ya (ihu...
Oche oche android android 7.1
Oche oche android android 7.1 Oche Leon android 7.1 ngagharị ngagharị ngagharị OS: Android 7.1.2 sistemụ CPU: Rock mgbawa PX3 Cortex A9 Ram: SAMSUNG DDR3 2GB Flash: 16GB Redio: FM / AM GPS: SIRF III Ihuenyo: Igwefoto nwere otutu ihu ya (ihu mbu...
Oche android 7.1 stereo ụgbọ ala
Oche android 7.1 stereo ụgbọ ala Oche android 7.1 stereo nghazi ngwanrọ OS: Android 7.1.2 sistemụ CPU: Rock mgbawa PX3 Cortex A9 Ram: SAMSUNG DDR3 2GB Flash: 16GB Redio: FM / AM GPS: SIRF III Ihuenyo: Igwefoto nwere otutu ihu ya (ihu mbu Hanstar)...
Android Car DVD Player Maka oche Ibiza 2013
Android Car DVD Player Maka oche Ibiza 2013 1. Site na android 6.0.1 os dị ọcha, 8 isi, 2G Ram + 32G ROM, nwere ike ịgba ọsọ ọsọ karịa. Maka gam akporo Car DVD Player Maka Oche Ibiza 2013, wuo n’ime ihe nlere redio nke nwere nnukwu redio, na-akwado...
LEON 2014 onye ọkpụkpọ DVD DVD maka usoro Seat
LEON 2014 onye ọkpụkpọ DVD DVD maka usoro Seat 1.LEON 2014 car DVD DVD for Seat series-- Elekere siri ike n’azụ: 7dynamic backgrouds dị. Ahịa nwekwara ike iji foto ha dị ka ndabere. 2. LEON 2014 player DVD DVD maka Seat bụ ojiji nke GPS (Global...
DVD ụgbọ ala Android maka oche oche LEON 2014
DVD ụgbọ ala Android maka oche oche LEON 2014 1. DVD ụgbọ ala gam akporo maka oche oche LEON 2014 bụ iji GPS (Global Positioning System) jiri maapụ elektrọnik mee, ọ ga - adaba adaba ma zie ezi ịgwa onye ọkwọ ụgbọala ka ọ gaa ebe nke kachasị nso ma...
Android ụgbọ ala dvd maka Ibiza 2018
Gam akporo 8.0 PX5 igwe ihe ọkpụkpọ egwu maka Seat Ibiza 2018 1.TPMS: Ejikọtara nke ọma na isi nke a na ntinye dị mfe, TPMS na-akọ akụkọ Real Madrid 8.0 PX5 media player auto-Seat Ibiza 2018 site na ngosipụta eserese ma ọ bụ ìhè ịdọ aka na ntị dị...
stereo ụgbọ ala nwere gps maka LEON 2014
Android 8.0 PX5 stereo ụgbọ ala nwere gps maka LEON 2014 Dabere na Kacha ọhụrụ gam akporo 8.0 Oreo OS, 1024 * 600 HD Capacitive Touch Screen, Octa Core 1512MHz CPU, 4GB Ram na 32GB Nchekwa Ime, Nkwado Media Card / GPS Card agbatịwo. Akụkụ Isi: 1)...
China Oche Android Car Dvd Ngwa
Ibiza Android Car Dvd (wifi ụgbọ ala dvd player)
1.Atọ ntọala na 2009, Shen Zhen Klyde Electronics Co., Ltd. na-ekpuchi mpaghara 7300 square mita ma were ndị ọrụ 230. anyị nwere ndị injinia R&D nwere ahụmịhe na ndị na-ahụ maka nkà na ụzụ iri na asatọ ndị na-emeziwanyewanye ma na-azụlite ngwaahịa ọhụụ iji mezuo ihe ndị ahịa chọrọ .Agbara ikike mmepụta kwa ọnwa dị ihe dị ka nkeji 27,000. Ngwaahịa anyị gụnyere gam akporo na wince Car DVD Player, nwere ahụmịhe afọ 7 na imebe, n'ichepụta na ire ahịa Car DVD player, anyị emeela mmekọrịta azụmahịa na ọtụtụ ndị ahịa akpọrọ si Japan, Russia, Ukraine, Turkey, Spain, Germany, Italy, Iran, Pakistan, Dubai, Israel, Korea, Saudi Arabia, India, Brazil, wdg.
Ibiza Android 4.4 Car Dvd, 7 inch HD ihuenyo nwere arụmọrụ niile. Ngwa ahịa ndị ọzọ na-apụta n'oge na-adịghị anya.
2.Ibiza gam akporo 5.1.1 Car Dvd, Cost-irè na map dị n'ịntanetị n'efu: You nwere ike ịnweta map dị iche iche dị n'ịntanetị dị ka maapụ Google, IGO, Sygic na Waze n'efu. Site na iji maapụ Google, ịnwere ike ịnweta ụzọ kachasị dị mma na nke kachasị ọhụrụ, data okporo ụzọ ndụ na ihe ndị ọzọ. Chọta ụzọ gị agaghị adị ọsọsọ ma dịkwa mfe. Kwado atụmatụ ejikọtara dị mfe: Dakọtara na ekwentị ndị nwere android na ngwaọrụ, njikọ ahụ dị mfe na-enyere njikwa n'etiti gị na ekwentị ụgbọ ala isi. Nwere ike ijikọ ma jikọọ ekwentị gị na Ibiza gam akporo Car Dvd site na USB, na enweghị sọftụwia ọzọ a chọrọ.
3.Ibiza gam akporo 6.0.1 Red redio, New HD 1024X600 capacitive ihuenyo mmetụ: Otu ihuenyo mmetụ ahụ a hụrụ na ekwentị smart gị, na-aza ajụjụ karịa oge ọ bụla, Bulit-in WIFI hotspots sharing: internet dị nfe na enweghị nke ị ga - eji mee ka ị chọọ ịntanetị. , lelee vidio dị n'ịntanetị, lelee akwụkwọ ozi gị, kpọọ egwuregwu, budata ngwa ọdịnala, ma ọ bụ ọbụna iji maapụ ịntanetị na-akwụghị ụgwọ.
Ibiza Android Car Dvd Ibiza Android 4.4 Car Dvd Ibiza gam akporo 5.1.1 Car Dvd Ibiza gam akporo 6.0.1 Redio ụgbọ ala Kia Android Car Dvd